Kurerutsa mukufungidzira kuri nyore kwehuwandu (column 473) - Rabbi Michael Avraham
Kurerutsa mukufungidzira kuri nyore kwehuwandu (koromu 473)
16 makomendi	/ 07 Iyar 05 - 2022/XNUMX/XNUMX 07 / 05 / 2022
Kutora nguva yakareba?
Vhura musati mutsva
Dhaunirodha [321.87 KB]
Dhaunirodha [53.66 KB]
16 Pfungwa dze “Kurerutsa muMafungiro Akareruka eStatistical (Column 473)”
Z. Bayer 07 - 05/2022/23 pa 14:XNUMX
Z. Bayer 08 - 05/2022/13 pa 07:XNUMX
Muchirevo chechinyorwa chegakava raBibi, gakava rinotora kuti kune imwe yepamusoro, kana zvichikwanisika (uye kunyange zvichibvira) kuti kune akati wandei anoyevedza, uye nekudaro kanenge kadiki. Mukutaura kwekuita nharo yacho haishandi zvishoma, izvo nharo inotaura ndezvekuti kune mutero wakakwana wemutero (maererano nemari yehurumende), nharo diki. Mubvunzo wakakosha ndewekuti ndeipi iyo yakakwana muzana, iyo inogona kusiyanisa kubva kune imwe hupfumi kuenda kune imwe uye neiyo macroeconomic mamiriro.
Muchidimbu, ruzivo rushoma rune modhi (fungidziro dzakaringana nezvechokwadi) harubatsiri.
Z. Bayer 08 - 05/2022/13 pa 13:XNUMX
Uku ndiko kushora kusina simba. Kwete kunyange ichokwadi zvachose, nokuti inowanzova nehukuru humwe chete, uye mumunda wega wega zvinoratidzira kuti hazvirevi kuti kuwedzera kwemitero kunowedzera mari. Iyi ndiyo nharo huru.
Iniwo handibvumi kuti ruzivo rudiki haruna kubatsira. Pano zvakare pane imwe nzira yakaoma ine optimum.
Z. Bayer 08 - 05/2022/13 pa 29:XNUMX
Ini handisati ndaverenga, asi imwe pfungwa yakabata mumaziso angu. Iwe wakanyora kuti mumaonero ako kana pasina ruzivo nezve kugovera maitiro saka hazvibviri kana kutaura pamusoro pekunzwisisa. Ndichitaura nezve izvo zvawataura kumagumo kuti zvienderane nenhaurirano pamusoro peGd uye kusikwa, pane nyaya yekuratidza kusarudzika kwehurongwa hwemutemo ndaifunga kuti wakataura kuti kusarudzika kunogona kutaurwa pasina ruzivo nezve kugovera. Chii chakasiyana?
Z. Bayer 08 - 05/2022/14 pa 44:XNUMX
Kana iyo nzira isingazivikanwe kwatiri zvachose asi pane imwe nzira ipapo, hapana chikonzero chekufungidzira kuti kugovera kwakafanana. Sezvandakataura, izvi zvakanyanya kusarudzika izvo zvandisingazovaka pane zvakawanda. Asi mumaonero ezvidzidzo zvouMwari pane fungidziro yekuti kuumbwa kwenyika inyaya yakakwana kubva mukusavapo zvachose (zvikasadaro mubvunzo ucharamba uripo wakasika izvo zvaive kare). Mumamiriro ezvinhu akadaro fungidziro yekuti kugovera yunifomu ndiyo inonzwisisika uye inonzwisisika. Kugovera kusina kuenzana kunoda chikonzero. Murotari yemweya, ingave yakaitwa naMwari kana imwe nzira pane chikonzero, uye munhu anofanira kuziva chikonzero ichi kuti ataure chimwe chinhu nezvazvo.
Z. Bayer 08 - 05/2022/14 pa 56:XNUMX
I'm complicated asi ndichaedza kutsvanzvadzira zvishoma. Zvakandiomera kuti ndione mutsauko uripo pakati pekugovera yunifomu uye kugovanisa zvisina kuenzana, asi ini ndichazvisiya zvakadaro (nekuti ipfungwa inoda kufungwa nezvayo) ndobvunza neimwe nzira - inoita kunge kugovaniswa kwakafanana (kwakakodzera kufunga nezve symmetry) inonyanya kukosha kupfuura kumwe kugovera kusina kufanana.
Mukuwedzera, uye ndinovimba handisi kukanganisa uye kukanganisa, zvichiita sezviri munyaya yezvizhinji zvezvirambidzo kuti kunewo maitiro e hardware.
H. Bayer 08 - 05/2022/16 na53:XNUMX
chaizvo. Nokudaro kugoverwa kwakafanana kunofungidzirwa mukusavapo kweimwe ruzivo. Ndiyo yakapfava uye yakanyanya symmetrical.
Nezve halakhah muzvirambidzo, imwe neimwe nyaya pane kwayo. Asi pane imwe inoenda kwete chete mushure mekutariswa kwenhamba asi mushure memitemo-halakhic mitemo (semuenzaniso edza kuve nyore. Kune meta-mutemo misimboti inofurira, nezvimwewo).
H. Bayer 08 - 05/2022/18 na53:XNUMX
Kana iri iyo yakapfava uye yakanyanya symmetrical saka ndiyo yakasarudzika, uye zvakadaro? Hupenyu nezvimwe.
H. Bayer 08 - 05/2022/20 na30:XNUMX
Isu hatisi grill kugovera. Kugovera kunodzora lottery. Kugoverwa kweyunifomu ndiyo yakapfava uye saka inofungidzirwa. Sezvakangoita kusona madonhwe pamutsetse wakatwasuka kuri nani pane kuasona uchitevedza sine, kunyangwe iwe uchigona kutaura kuti mutsara wakatwasuka ndiwo wakapfava uye saka wakanyanya kukosha.
H. Bayer 08 - 05/2022/21 na40:XNUMX
Sezvinei kubva panzvimbo yawakauya mumutsara wakatwasuka nekuti unoona kuti pane mutsara wakapfava uye wakakosha unosona zvinenge zviri ipapo saka zvingangoita kuti izvi hazvisi masanga. Asi isu hatigone kufunga pekutanga kuti chimwe chiitiko chinowira pamutsara wakatwasuka pasina chero anchoring. Ini ndinonzwisisa kuti uri kuti kufunga kuri nyore kuri kwakazara, asi mutsetse unoratidza sei izvozvo.
(Ndakafungisisa pamberi pekutaura kwekare pamusoro pekugovera lottery uye handina kuiwana uye ndichiri kushamisika)
H. Bayer 09 - 05/2022/07 na38:XNUMX
Handisi kunyatsonzwisisa kuti nhaurirano yacho ndeyei. Iwe haubvumirani here kuti kana pasina rumwe ruzivo kugovera kwakafanana kungangoita? Sei uchiita musiyano pakati pemigumisiro? Kana iwe usingazive mutsauko pakati pemhedzisiro munzvimbo yemuenzaniso zvinowanzoitika kuti vese vane huremu hwakafanana. Handizivi chekuwedzera.
H. Bayer 09 - 05/2022/09 na48:XNUMX
Asi iwe unofunga kuti kunyange kana pasina ruzivo hazvibviri kuva nekugoverwa kwakafanana mumweya. Uye iwe wakatsanangura kuti imhaka yekuti kune nzira isingazivikanwe, uye chete mukubuda kweiyo isina kupera maitiro emitemo aifanira kubuda mukugovera kwakafanana uye saka iyo yakasiyana yehurongwa ine humbowo hwekusika.
Ini handisati ndave nemafungiro akasimba, uye pamwe pane mutsauko pakati pezviitiko zvisati zvaitika (kuti kana munhu akaverenga tarisiro munhu anofanira kunge achitora kugovera kwakafanana) uye mushure mekunge zvaitika (zvino zvakaoma kwazvo kufunga nekuchenjera kuti zvinofanirwa. zvaitika mukugovera yunifomu). Uye MM nenzira yako ndakabvunza uye kana ndaneta ndaneta.
H. Bayer 09 - 05/2022/12 na32:XNUMX
chaizvo. Uye ndakatsanangura kupatsanura. Mukuita nyaya dzekugovera dzakafanana. Muchisarudzo chekusarudza hapana chikonzero chekufungidzira izvo chaizvo. Uye ini ndakawedzera kuti pamwe izvi ndizvo zvandaizofungidzira pasina ruzivo, asi ini handingavaka chero chinhu pairi.
Zvinoita sekuti taneta.
H. Bayer 09 - 05/2022/12 na54:XNUMX
Unogona here kujekesa kwandiri kana ndikanzwisisa nenzira kwayo kuti muhumbowo hwekusava nechinhu (uchifunga kuti zvinogoneka, nekuda kwekuratidza Petah Tikva yakazvimirira yecosmology) uri kutaura zvakanaka kuti kuchave nekugoverwa kwakafanana (uye izvi ndizvo. chirevo chakakosha chehumbowo), kwete kungofungidzira kwekushaya ruzivo.
H. Bayer 09 - 05/2022/13 na38:XNUMX
Ehe. Kana ichibva kupi nekupi saka inofanirwa kubatwa sekugoverwa kwakafanana.
Z. Bayer 08 - 05/2022/14 pa 30:XNUMX
Kana fungidziro iri yekuti isu hatisi yakakosha, saka hazvina basa zvachose kuti chii chinoitika kwatiri chinoitika kekutanga kana munguva pfupi yapfuura, paine mukana we50% kana mukana we1 patiriyoni, zvinoenderana nenhamba mitemo kana zvinopesana. kwavari. Zvose izvi hazvishanduke zvachose. Pashure pezvose, isu hatisi vakakosha.
Saka nhaurirano yese iyi haidiwe.
Join vamwe 3,091 vanyoreri
Mharidzo nevachenjeri - Beer Hagola
Kukosha kwehuzivi mumubvunzo wekuti nei tichitenda
Hanzi ndakagara pairi panguva yekufa kwake.
Ndino On Mhinduro yekusanganisa uswa haina kunaka nekuti ndeye kosher yeRambam
Tirgits On Mhinduro kumharidzo dzevachenjeri - Beer Hagola
Simba remunamato pafetus On Iran iri pano here? Pamusoro peKufambira mberi uye Sane Liberalism (Koramu 483)
Uye kune imwezve referensi On Iran iri pano here? Pamusoro peKufambira mberi uye Sane Liberalism (Koramu 483)